Kugqugquzelwe umphakathi ngokwekwenza okulungile | News24
Kugqugquzelwe umphakathi ngokwekwenza okulungile
PHOTO: precious Gumede Behola imashi yokulwa nobugebengu kusukela kwesokunxele imeya ye-HCM uCllr Nomusa Mqwebu, ungqongqoshe uWeziweThusi, kanye noCllr uNtombifikile Gumede imeya ye- Ugu.
UNGQONGQOSHE wezokuThuthukiswa koMphakathi ophinde abambe isihlalo sokuba iqhawe loGu emnyangweni kandunankulu uMama uWeziwe Thusi uhambele umphakathi waseGamalakhe asoGwini eT.B Molefe ezogqugquzela udaba lokubika ubugebengu eminyangweni kahulumeni ikakhulukazi uma kuphathwa udaba lokugwazisa ngezimali ezinsizeni zikahulumeni okungafanele engabe ziyakhokhelwa.
Loluhlelo oluhanjiswa uThusi lubizwa nge “I Do Right Campaign’ ngamafuphi okuqonde ukuthi ‘ngenza okufanele.”
Lomcimbi obumkhulu ngohlobo oluyisimanga uqale ngemashi lapho izimeya, amakhansela namalunga omphakathi bemashe ngezinyawo besuka eZ.G beya ezinkundleni eT.B Molefe becula amaculo omzabalazo. Bebephethe izinqwembe ezinemibhalo eliwisana nobugebengu.
Isikhulumi uAdvocate Simo Chamane­ ongummeli wabantu ehhovisi likaNdunankulu uchazele abomphakathi ukuthi inhloso yalomcimbi yini. UChamane uthe lolu uhlelo lwazwelonke uNdunakulu athe iKwaZulu-Natal nayo kumele iluthathe ilusebenzise emiphakathini ukuze kubuyiswe ukuthembeka.
“Loluhlelo lubhekene nokubuyisa unembeza ebantwini bonke baKwa-Zulu-Natal, abasebenzi bahhulumeni, imphakathi naye wonke umuntu ukuze izimpilo zethu ziqhubeke ngaphandle kobugebengu,” Kusho uChamane.
Uthe umphakathi akumele uvumele abasebenzi bakahulumeni badlale ngawo. Kumele babike yonke inkohlakalo eyenzekayo emahhovisi.
Uphinde wakhipha izinombolo lapho kubikwa khona noma yiluphi uhlobo lobugebengu.
“Kunezinombolo lapho umphakathi ungakwazi ukuthi ubike ukukhohlakala okuqhamuka noma ikuphi emiphakathini yawo ehhovisi lika Ndunankulu.
“Leyo nombolo ithi 080 059 6596 enye inombolo okungabikwa khona ubugebengu okwenzeka Ogwini nakunoma imuphi umasipala ongaphansi kwalo ethi 080 111 1660,” kusho uChamane.
Umphakathi unikezwe ithuba lokuphosa imibuzo kuhulumeni, izikhalazo nezicelo onazo.
Basukumile abantu, abaningi babo bakhala ngentuthuko. Omunye uthe esigodini sangakubo umgwaqo awulungisiwe.
“Kuba nzima noma sigulelwa ukuthi abosizo oluphuthumayo bafinyelele esigulini.
Siyacela ukuthi uhulumeni asibhekelele loludaba,”
Omunye uthe bona emphakathini wabo bakhala ngezikhungo zokuthuthukisa amakhono.
Omeya kanye nonqgonqgoshe bazilalelile baphinde bazibhala izikhalazo zabantu kanti ezinye baziphendula.
Umeya wasoGwini uCllr uNtomfikile Gumede yena usukume nokuthi agqugquzele abazali ukuthi bakhulise izingane zabo ngendlela efanele ngoba umuntu indlela yokuziphatha uyifunda ekhaya.
UGumede uthe ngalokhu uthi uma wonke muntu ephuma ekhaya elifundisekile ubugebengu bungaphela.
Emaphethelweni omcimbi kunandiswe ngomculo wokholo kunandisa owokudabuka khona laOgwini uSifiso Ncwane osukumise ngisho nesinedolo.